Maareynta Calaamadda: Diirad Saarayaasha Macaamiisha iyo Noocyada Diirada Saaran Waxsoosaarka
Nike waxay u keentaa alaabooyin badan cayaaraha tartanka.
Qaab dhismeedka sumadeynta Mareykanka, runti waxaa jira kaliya laba nooc oo noocyo ah: macaamiisha diirada saarey or wax soo saarka-diiradda.
Haddii aad sameyn doontid wax shaqo ah oo ku wareejinaya astaamahaaga, ama lagu siinayo lacag si aad ula dhex wareegto astaanta qof kale, waxaad si fiican u ogaan lahayd nooca summaddeed ee aad haysato. Shuruucda sida mid walba looga shaqeysan karo aad ayey u kala duwan tahay waxayna fidineysaa jidka oo dhan ilaa fariinta, soosaarka wax soo saarka cusub, xulashada kanaalka, astaamaha / faa iidooyinka alaabta, ama wax soo saar kale oo horumarineed ama Suuq geyn ah.
Dabcan, waxaad weydiin doontaa: Shirkadaha sumadaha leh dhammaantood miyaanay ahayn inay diiradda saaraan macaamiisha iyo sheyga labadaba? ” Hagaag, haa. Laakiin waxa halkan muhiim ka ah waxa astaantu udub dhexaad u tahay, iyo sida ay ugu talo jirto inay u koraan. Aynu quusinno:
Nooc Macaamil-Macaamiil ah
Nooca macaamiisha diirada saaraya ayaa tilmaamaya nooc muhiim ah oo adeegsade ah, ka dibna si xamaasad leh u bixiya alaabooyinka buuxiya baahiyaha isticmaalaha. Khariidadda nooca noocan ah waxay u egtahay sidan:
Tusaalooyinka qaar ka mid ah noocyada macaamiisha diirada saaraya: Nike, Apple, BMW, Harley-Davidson
Marka laga hadlayo Nike, sumadda ayaa xuddun u ah Ciyaaryahan Tartan. Nike waxay diiradda saaraysaa dhammaan dareenkooda Ciyaaraha, laakiin waxay bixisaa wax ka badan kabaha; waxay soo bandhigaan dhammaan badeecadaha ku xeeran ee Cayaaraha u baahan khibrad. Tusaale ahaan, kubbadda koleyga Nike waxay iibisaa kabaha, kuleylka, gaagaaban, funaanadda, madaxa, dhalada biyaha, boorsada isboortiga, tuwaalka, iyo kubbadda. Waxa kaliya ee aysan iibin waa maxkamadda kubbadda koleyga, laakiin waxay u badan tahay inay kafaala qaadaan.
Fikradda ah inay iibiyaan dhammaan waxyaabahaan kubbadda koleyga waxay umuuqdaan dhibic yar, laakiin maahan. Waa qayb iyo qayb ka mid ah waxa ka dhigaya shirkadda Nike nooc weyn oo diiradda saaraya macaamiisha. Waxay bilaabeen inay yihiin shirkad kabo ah, waxayna ku dambeeyeen BILAASHA meesha loo aadayo khibradaha ciyaaraha fudud. Waxay sooxireen khadad alaabooyin badan, iyagoo adeegsanaya warshado badan, oo leh teknoolojiyad badan, hal fikrad kubbadda koleyga ah.
Si loo barbardhigo qodobkaan: Haddii Cole-Haan uu tan ku sameyn lahaa hareeraha Xirfadle Ganacsi. Waxay ku qasbanaan lahaayeen inay dhisaan shirkad aan iibin kaliya kabaha dharka, laakiin sidoo kale iibiya dharka ganacsiga, funaanadaha dharka, xirmooyinka, boorsooyinka, folios, qalimaan, iyo bakeeriyada qaxwada. Qiyaas nooca dadaalka horumarinta wax soo saarka ee ay qaadan karto in la dhiso dhammaan khadadkaas. (taas oo ah sida saxda ah waxa ay yihiin samaynaya)
Nooc Feejignaan Badeecad Leh
Nooca badeecada diiradda saaraya wuxuu tilmaamayaa nooca dhibaatada muhiimka ah, ka dibna si xamaasad leh ayuu ugu gudbinayaa xalka nooc kasta oo adeegsade ah oo dhibaatadaas la soo gudboonaada. Khariidadda nooca noocan ah waxay u egtahay sidan:
(Tusaalooyinka qaar ka mid ah noocyada waaweyn ee diiradda saaraya alaabada: Mawjadaha, Crest, Kleenex, Coke, McDonalds, Marlboro, Google)
Coca-Cola waxay qabatay shaqo lagu kalsoonaan karo oo xalinta harraad / qanacsanaan dhibaatooyinka dhammaan noocyada macaamiisha. Coke ma sameynayo wax kale oo aan ahayn kookaha, laakiin wuxuu u bixiyaa siyaabo badan oo kala duwan oo ay jirto in qof nool uu nool yahay oo aan fahmin bixinta alaabta Coke.
Kaliya waxay bedelaan dhowr maado (sonkorta iyo kafeega) iyo habab bixinta (ilaha, dhalada, qasac) waxayna ku garaaci karaan macmiil kasta oo halkaas jooga. Tusaalooyin yar: Qoyska guriga jooga: 2 dhalo oo litir ah; qofka miisaanka ku socda ee socda: 12 oz gasacadaha cuntada coke; loogu talagalay cunnada soonka degdegga ah ee qiimaha badan raba: isha aan dhammaadka lahayn ee soodhaha; loogu talagalay ilaaliyaha baarka hudheelka: 8 oz dhalo dhalo ah. Badeecad isku mid ah, macaamiil kala duwan ayaa loo baahan yahay.
Marka, nooc noocee ah ayaan haystaa?
Waxaa jira tijaabo fudud oo fudud oo lagu ogaanayo nooca sumadda aad la shaqeyneyso. Laakiin marka hore, qoraal ku saabsan sababta aad ugu baahan tahay inaad tan ugu ogaato inuu yahay xirfadle suuq-geynaya ama horumarinta wax soo saarka. Haddii aad ogtahay nooca sumadda aad tahay, ayaa kuu sheegaysa waxa aan la sameyn.
Magac ahaan, ha beddelin macaamilka haddii aad leedahay sumad diiradda saareysa macaamiisha, hana beddelin badeecada sumad diiradda saareysa alaabada. Waan ogahay inay taasi u muuqato carrab la ', laakiin waxaan fadhiistay waddooyin aad u fara badan shirar ku saabsan Horumarinta Wax soo saarka si aan ugu maleeyo inaysan dhicin. Xaqiiqdii, waxaan sharad ku galay meel ka mid ah Talyaaniga, waxaa jira shaqaale aad u fiican Ferrari (macmiil: macho speed guy) oo soo jeedinaya inay soo bandhigaan khad cusub oo SUV ah (macmiil: hooyada kubadda cagta). Dhammaan maxaa yeelay ma fahmin diiradooda.
Waa maxay tijaabadu? Si fudud:
Haddii aad rabto inaad astaanta astaanta meel ku dhejiso jirkaaga, ama aad gaarigaaga ku dhejiso, waa a sumadda macaamiisha diirada saartay.
Haddii aad ka fikirto astaanta, laakiin aadan rabin inaad xirato, waa a sumadda wax soo saarka diiradda saarey.
Haddii aadan labadiinaba xiirin astaanta, ama aad aad uga fikirtaan, waa uun a summad xumo.
Tags: brandsuuq geyn suuq geyn ahCoca-ColacokedeeqsiinNikepepsi
Oktoobar 17, 2011 at 12:49 AM